Cable Gland, Sokiro On Connector Wire, tantera-drano Junction Box - Yaonan Electric
Zhejiang Yaonan Electric Co., Ltd. Niorina tamin'ny 2017 miaraka amin'ny voasoratra anarana renivohitry ny 10 tapitrisa Yuan (taloha atao hoe Yueqing Yaonan Electric orinasa, naorina tamin'ny 1996). Ny orinasa no misy ao amin'ny China Electric Appliance Capital - Liushi, Yueqing, dia indostria sy ara-barotra fampidirana orinasa, misahana manokana ny plastika vokatra avo sady malefaka iva fitaovana elektrika sy ny fitaovana sy ny famokarana metatra.
Ny orinasa mamokatra indrindra indrindra: nylon tie, Stainless vy tie, Steel fantsika tariby karatra, tantera-drano tariby fihary, alalan'ny terminal andian-tsoratra, faritra mpandika, manondro metatra, Hafanàm-po an metatra sy hery metatra sns Products no be mpampiasa sy ny tolotra: milina, hery, elektronika, fifandraisana, miaramila, fifehezana, mpampatsiro hanina, orinasa, jiro, ny fitaterana sy ny lalamby orinasa hafa. Products no naondrana any Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Moyen-Orient, Afrika sy Azia Atsimoatsinanana, toy ny firenena mihoatra ny 90 sy ny faritra ...
Mandehana any Dubai ho an'ny fampirantiana 2
YAONAN herinaratra, tamin'ny Martsa 2018 mba handray anjara amin'ny fampirantiana herinaratra Afovoany Atsinanana, plastika vokatra dia tarehy maro vahiny avy any ivelany. Tamin'ity indray mitoraka ity, ny ekipa nandefa 7 raharaham-barotra sy ara-teknika vato nasondrotry, mampiseho ny superi ...
Mandehana any Dubai ho an'ny fampirantiana.